‘पानीको पाइप लाइन विस्तार गर्ने योजनामा छौं’ – Janasamsad
४ पुष २०७६, शुक्रबार ०८:४१
‘पानीको पाइप लाइन विस्तार गर्ने योजनामा छौं’
कमल गाउँपालिकास्थित तोपगाछी खानेपानी स्किम नम्बर १ को अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी हाल सूर्य लिम्बूले सम्हालिरहेका छन् । २०६९ सालमा पहिलोपटक चुनावी प्रक्रियाबाट उनी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । उक्त संस्थाको दोस्रो कार्यकालमा भने लिम्बू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष लिम्बूसँग खानेपानीका विद्यमान चुनौती, अवसर, सम्भावनालगायत विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर जन–संसद्कर्मी उमानाथ भण्डारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
समग्रमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लोसमय तोपगाछी खानेपानी स्किम नम्बर १ को अवस्था राम्रो छ । म पहिलोपटक निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा संस्थाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । २०७२ सालको भूकम्पले झन् ठूलो समस्या ल्यायो । दुईवटै बोरिङ्गमा क्षती पुग्यो । त्यसलाई बल्लतल्ल समाधान गर्यौं । उपभोक्ताबाट आर्थिक रुपमा ठूलो सहयोग प्राप्त भयो । जसको फलस्वरुप पछिल्लोसमय अवस्था सन्तोषजनक छ ।
संस्थाको अवस्था राम्रो छ भन्नुभयो । पानीको गुणस्तर चाहिँ कस्तो छ नि ?
पानी सफा देख्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने हाम्रो बानी छ । हामी त्यही भन्दै आएका छौं । तर, त्यसो होइन, गुणस्तर भन्नासाथ पिउन योग्य पानी भन्ने बुझ्नुपर्छ । पानीमा आइरनको मात्रा न्यूनतम् शून्य दशमलव ३ र अधिकतम् शून्य दशमलव ९ हुनुपर्छ । हाम्रो ट्यांकीबाट वितरण भइरहेको पानीमा आइरन शून्य दशमलव ६ रहेकाले पानीको गुणस्तर राम्रो छ । तर, अझै पनि सुधारको खाँचो छ ।
स्थानीय सरकारबाट संस्थाले कस्तो सहयोग पाएको छ ?
पानीको गुणस्तर र पाइप लाइन विस्तारका लागि गतवर्ष पनि गाउँपालिकाबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको थियो । यसवर्ष पनि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने सुनेको छु । तर, गाउँपालिकाबाट आधिकारिक रुपमा रकम विनियोजन भएको पत्र भने आएको छैन ।
गाउँपालिकाबाट विनियोजन हुने बजेटले के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकमले पाइप लाइन विस्तार गर्ने योजनामा छौं । यसअघि सडकको एकातर्फ मात्र पाईप विस्तार गरेका थियौं । अब त्यस्तो अवस्था रहेन । अब सडकको दुवैतर्फ पाइपलाई विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा विस्तार गरिएका पाइपलाई सडक विस्तारले असर गरेको छ । त्यसलाई पनि आवश्यक मर्मत तथा सम्भार गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले १८ हजार वर्गमिटर पाइप विस्तार गर्नुपर्नेमा सडकको दुवैतर्फ मिलाउँदा ३६ हजार वर्गमिटर हुन्छ । अब त्यता पट्टि ध्यान दिन्छौं ।
पानी भण्डारण (ओभरहेड ट्यांकी)को क्षमता बढाउन कस्तो पहल भइरहेको छ ?
हामीसँग अहिले पानी भण्डारण(ओभरहेड ट्याँकी) १ लाख लिटर क्षमताको छ । हामी १ हजार ५ सयवटा धारा वितरण गर्न सक्छौं । तर, पाइप विस्तार नभएका कारण हालसम्म ८ सय २० वटा मात्र धारा वितरण गरेका छौं । सबै ठाउँमा पाइप विस्तार भएपछि थप ट्यांकीको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि पहल जारी राखेका छौं ।
पानी जीवन हो । स्वच्छ पानी पिउन पाउनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो । स्वच्छ पानी पिउँदा ८० प्रतिशत रोग लाग्दैन । तर, यसको व्यवस्थापनका लागि चुनौती पनि उत्तिकै छ । एउटा ओभरहेड ट्यांकीको आयु सकिने बित्तिकै अर्को तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने रहेछ । यो पनि एउटा व्यवसायनै हो । नियमित रुपमा गुणस्तरीय पानी वितरण गर्नसक्दा संस्थाको आम्दानी पनि बढ्ने रहेछ । हिजो बिजुलीको बिल तिर्न संस्थामा पैसा थिएन तर, अहिले २५ लाख रुपैयाँ बढी रकम बैंक मौज्दात छ । संस्थालाई यो अवस्थासम्म ल्याईपुर्याउन सहयोग गर्ने उपभोक्ता, कार्यसमिति परिवार, कर्मचारी वर्ग, संघसंस्थालगायत सम्पूर्णप्रति आभारी छु र, सधैं यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्छु ।
‘समृद्ध बुद्धशान्तिको अभियानमा छौं’–रमेशकुमार भूजेल
सोच, संस्कार र चिन्तनको खडेरीमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना